Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရသေ့တောင် မြို့နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခထပ်ဖြစ်၊ လူ ၁၂ ဦးသေဆုံး
ရသေ့တောင် မြို့နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခထပ်ဖြစ်၊ လူ ၁၂ ဦးသေဆုံး
ပဋိပက္ခ ပြီးခါစ စစ်တွေမြို့ကို ဤသို့တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ကျေးရွာနေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အနောက်ပြင် ကျေးရွာနေ ဘင်္ဂါလီများ ယမန်နေ့က ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဘင်္ဂလီ ၂ ဦးနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသွားသည့် ရခိုင် ၁၀ ဦး၏ အလောင်းများကို ဘင်္ဂါလီများက ဆွဲယူသွားကြောင်း၊ အလောင်း ၁ လောင်းကိုသာ ပြန်ထုတ်ပေးပြီး ၉ လောင်းကို ထုတ်မပေးသေးသည့် အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် တင်းမာမှုများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
‘‘စစ်တပ်က အင်အား ၃၀ လောက်နဲ့ ရခိုင် လူကြီး ၄ ယောက် ဘင်္ဂါလီကျေးရွာတွေဘက် သွားတောင်းတယ်။ အလောင်း ၁ လောင်းပဲ ပြန်ရခဲ့တယ်” ဟု ကူတောင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ဦးစောရွှေက ပြောသည်။
သေဆုံးသည့် ၁၀ ဦးတွင် ဦးသိန်းဟန်၏ အလောင်းသာ ပြန်လည် ရရှိခဲ့ပြီး ဦးသောင်းရွှေထွန်း၊ ဦးပြူးချေ၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးထွန်းပေါ်၊ ဦးကျော်ထွန်းတင်၊ ဦးသန်းရွှေ၊ ဦးတင်လှိုင်၊ ဦးသန္တာအောင်နှင့် ၎င်း၏ သားဖြစ်သူ ကိုထွန်းထွန်း တို့၏ အလောင်းများ ပြန်လည်မရရှိသေးချေ။
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ကိုထွန်းထွန်းနှင့် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးသန္တာအောင်တို့သည် ပဋိပက္ခ ကြားမှ ထွက်ပြေးစဉ် ဘင်္ဂါလီများက တိုက်ခိုက်သဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ၎င်းအဖြစ်ပျက်ကို မြင်တွေ့ခဲ့သည့် ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။ ဦးသန္တာအောင်သည် ကူတောင်မြို့ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ စာရေး ဖြစ်သည်။
ယနေ့ နေ့လယ်က ရခိုင်ဒေသခံများနှင့် ဘုန်းကြီးအပါး ၅၀ ကျော်တို့သည် ဘင်္ဂါလီများထံမှ ကျန်ရှိသည့် အလောင်း ၉ လောင်းကို သွားရောက် တောင်းယူကြကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီများက အလောင်းများကို ၎င်းတို့ ကျေးရွာထဲတွင် ၀ှက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အလောင်းများ ပြန်မပေးသောကြောင့် နှစ်ဘက် အခြေအနေ တင်းမာနေကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂါလီများသည် ယမန်နေ့က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ နေအိမ်များကို စတင်မီးရှို့ခဲ့ရာမှ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ မီးရှို့ခံရသည့်ကျေးရွာနေ ရခိုင်များက ဓားနှင့် တုတ်များ ဆွဲကိုင်ပြီး ဘင်္ဂါလီများကို လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ရာမှ အနောက်ပြင် ကျေးရွာအနီးတွင် ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင်များကို တူမီးသေနတ်များနှင့် ပစ်ခြင်း၊ ဓားးများနှင့် ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
‘‘သေနတ်သံ သုံး၊ လေးချက်တော့ ကြားရတယ်။ ပေါက်ကွဲသံတွေလည်း ကြားရတယ်။ အခုတော့ စစ်တပ်က အခြေနေတွေကို ပြန်ပြီး ထိန်းသိမ်းနေပါတယ်” ဟု ရသေ့တောင် ဒေသရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ယမန်နေ့က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရခိုင်ဒေသတွင် စစ်တပ် လုံခြုံရေး ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် မလိုလားအပ်သည့် ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက တာဝန်ယူလိုစိတ် မရှိဘဲ အရေးပေါ် လုံခြုံရေး တောင်းဆိုသည့် အချိန်တွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဘဂါင်္လီများ၏ ရန်ကို ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြောက်လန့် နေရကြောင်း သူက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တခြားသော မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများ တည်ငြိမ်စ ပြုနေသော်လည်း ရခိုင်ဒေသခံများမှာ ဘဂါင်္လီများ၏ အကြမ်းဖက်မှု ဒဏ်ကို ကြောက်လန့်ကာ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက် ခိုလှုံမှုများသည်ထက် များလာကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် အခက်အခဲ ဒုက္ခ ကြုံရသူပေါင်း ၉၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး အကူအညီများ လိုအပ်နေကြောင်း ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် (WFP) မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောကြားထားသည်ဟု AP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ စာသင်ကျောင်းများ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဒုက္ခသည် စခန်းပေါင်း ၆၀ ၀န်းကျင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:33
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရသေ့တောင် မြို့နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခထပ်ဖြစ်၊ လူ ၁၂ ဦးသေဆုံး . All Rights Reserved